सरकारलाई यस्ताे सूचना दिनुहोस्, १० लाखसम्म लिनुहोस् ! - News Express24 Nepal
सरकारलाई सूचना (सुराकी) दिए १० लाख सम्म पुरस्कार पाइने कुरा तपाईंलाई थाहा छ ? हो, सरकारलाई सूचना दिएकै भरमा तपाईंले १० लाख रुपैयाँसम्म पाउन सक्नुहुन्छ । कुनैपनि वस्तु चोरी पैठारी भएको छ भने सोको सूचना सरकारलाई दिनुहोस् र १० लाखसम्म पाउनुहोस् । यस्ता खालका सूचनामा सरकारले १० लाखसम्म पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, सो रकम सुराकीको प्रकृतिको आधारमा निर्धारण गरिएको छ । सबै खालको सुराकीमा १० लाख पाइँदैन । भन्सार विभागले सुराकीलाई पुरस्कार दिँदै आएको छ । तर, अब त यस्तो पुरस्कारको राशीसमेत बढेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पुरस्कारको राशीसमेत बढाइएको छ । भन्सार नियमावली २०६४ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।भ न्सार नियमावलीलाई संशोधन गरेर पुरस्कारको राशी बढाइएको हो । भन्सार विभागका प्रवक्ता शिशिर घिमिरे भनसार नियमावलीको संशोधनले सुराकी दिनेको पुरस्कारको रकम बढाइएको बताउँछन् । सुराकीको प्रकृति अुनसार सुराकी दिएबाट पक्राउ भएको माल वस्तु लिलाम विक्री गरिसकेपछि विक्री पश्चात प्राप्त भएको रकमको निश्चित प्रतिशत सुराकीले पाउँछ । भन्सार नियमावली २०६४ को १ मा पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । कसैले कुनै वस्तु चोरी पैठारी गर्न लागेको सुराकी दिन्छ भने उसले वस्तु लिलाम बिक्रिबाट आएको १५ प्रतिशतसम्म रकम पाउँछ । अहिले यो रकम ५ प्रतिशत बढाइएको छ । यस अघि १० प्रतिशत मात्र दिने व्यवस्था थियो । यस्तै चोरी निकासी वा पैठारी गर्न लागेको मालवस्तुसहित मानिस पक्रेर पेश गर्नेले दिने पुरस्कार १० प्रतिशले बढेर ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसअघि २० प्रतिशत पुरस्कार दिइन्थ्यो । चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गर्न लागेको मालवस्तु मात्र पक्रेर पेश गरेमा १० प्रतिशतसम्म पुरस्कार दिइन्थ्यो भने अब २० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
Previous article यस्ताे गर्दै थाइल्याण्डमा बेनिशा हमाल
Next article लामखुट्टेले लियाे ४० को ज्यान …